VaTrump neMudzimai Wavo Vanobatwa neCovid-19
Mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump nemudzimai wavo, Amai Melania Trump. Vaviri ava vazivisa kuti vakabatwa neCovid-19.
Mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump, pamwe nemudzimai wavo, Amai Melania Trump, vazivisa mambakwedza eChishanu kuti vakabatwa nechirwere cheCovid-19 mushure mekuvhenekwa kana vaive nechirwere ichi nemusi weChina.
Kuwanikwa kwaVaTrump nemudzimai wavo vaine chirwere ichi kaitika mushure mekunge mumwe mushandi wekumuzinda weWhite House, uye vari chipangamazano chaVaTrump, Amai Hope Hicks, vawanikwawo vaine Covid-19.
Kubatwa kwaVaTrump vaine Covid-19 kwaitika mazuva mashoma vabva kuita gakava rekutanga nevari kumirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika, VaJoe Biden.
Vachinyora padandemutande reTwitter, mutungamiri weAmerica vati ivo naAmai Hicks vatotora matanho ekunge vari kwavo voga panguva iyo vanenge vachirapwa chirwere ichi.
VaTrump naAmai Trump vanonzi vachange vachizvichengetedza vari kwavo voga vari pamuzinda weWhite House kusvika vapora.
VaTrump havasi ivo mutungamiri wenyika kana wehurumende wekutanga kubuda pachena kuti vabatwa nechirwere charura pasi rose ichi.
Mutungamiri wehurumende yeBritain, VaBoris Johnson, mutungamiri weBrazil, Va Jair Bolsonaro, pamwe nemutungamiri wehurumende yeRussia, Va Mikhail Mishustin pamwe nemamwe kaurukota edzimwe dzihurumende vakabatwawo neCovid-19 vakabudawo pachena.
Vachinyorawo padandemutande reTwitter, mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vatumirawo mashoko ekushingisa VaTrump pamwe nemudzimai wavo Amai Trump, vachiti vanovashuvira kuti vakasike kupora kubva kuchirwere ichi.
Nyanzvi mune zvehutano vari chiremba vari kuNorth Carolina, Doctor Simbiso Ranga, vanoti kubuda pachena kwaVaTrump chinhu chinofanirwa kupembedzwa sezvo izvi zvichisimbisa vanhu vanovatevera.
"Kubuda pachena kwaita VaTrump kuti vane chirwere cheCovid-19 ndizvo zvatinotarisira kuvatungamiri venyika nema leaders pasi rese nokuti chirwereka! Ukabata chhirwere chinoparadzirwa seCovid-19, kuzivisa hama neshamwari nevari padhuze vaunoshanda navo zvinhu zvinenge zvakanaka," vanodaro Dr. Ranga.
Vanoti izvi zvakanakira kuti zvinoita kiuti munhu wese atevere matanho anga agara achikurudzirwa nenyanzvi dzezvehutano akaita sekupfeka zvinovhara miromo nemhino, kusiya mikaha pakati pevanhu, uye kusaenda kunzvimbo dzinounganwa, zvikuru dzinenge dziri muzvivakwa.
America ndiyo iri pamberi pahuwandu hwevanhu vabatwa neCovid-19 pasi rose.
Vanhu vabatwa neCovid-19 muAmerica vadarika mamiriyoni manomwe nemazana mashanu ezviuru, uye vafa munyika iyi vadarikaw.o zviuru mazana maviri negumi nezvitatu.
Pasi rose vanhu vabatwa neCovid-19 vadarika mamiriyoni makumi matatu nemana, nezviuru mazana manomwe nemakumi matatu nezvina. Vafa pasi rose vadarika miriyoni imwe chete nezviuru makumi matatu nechimwe